Ahoana no hahazoam-bokatra tsara tsy misy fihetsiketsehana spammy?
Backlinks dia manatsara ny lanjany ho an'ny ankamaroan'ny fikarohana. Mampiseho ny fahefan'ny sehatra manokana sy ny lanjany ho an'ireo mpampiasa izany. Raha te-hanangana fanentanana fanentanana fikarohana ianao ho an'ny tranonkalanao sy ny fitohizan'ny fifamoivoizana ara-boajanahary tsy tapaka, dia mila mandinika manokana ny paikady fanorenana rohy. Ny fitsipika fototra tokony harahinao dia ny hoe ny kalitaon'ny rohy anatiny no sarobidy kokoa ho an'ny Google noho ny habeny. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny safidy bebe kokoa amin'ny backlinks amin'ny tranonkala manana laza anao, ny laza ambony kokoa azonao eo imason'ireo fitaovam-pikarohana ary avy eo ny avo kokoa hapetraka amin'ny SERP.
Amin'izao fotoana izao dia misy rohy fananganana rafitra mifandraika amin'ny fihetsiketsehana spammy izay natao handika ny toro-lalana Google. Na izany aza, tokony ekena amin'ny fomba toy izany. Betsaka ny teknôlôjia fanamafisana hafa ary mety hanatsara ny tranokalanao SEO raha tsy mitsambikina toerana hafa. Raha toa ny toerana misy anao amin'ny tranokala tsara tarehy na mifanohitra amin'ny tsenan'ny toeram-pivarotan-tsarimihetsika tsara loatra, dia mety ho sarotra ny hahazo ny backlinks kalitao. Na izany aza, misy 100% ny tetikasa fanorenana rohy mampiavaka izay hampisy mora kokoa aminao ary hanampy anao hahazo ny tsara indrindra amin'ny backlinks. Andao horesahina amin'ny antsipiriany bebe kokoa ny fomba fampiasana manaraka ireto.
Azonao atao ny manana fahafahana miditra amin'ny rindran-damina amin'ny mpifaninana aminao amin'ny alàlan'ny fitaovana an-tserasera (Internet) na amin'ny tanana mikaroka ny tranonkala ho an'ny fitrandrahana manokana. Tsy ianao ihany no te hanatsara ny fomba fijerinao amin'ny Internet momba ny valin'ny fikarohana, fa ny mpifaninana ihany koa dia miasa amin'izany, indrindra ireo izay manana toerana ambony indrindra ary efa mihoatra ny herintaona. Azonao atao ny maka ny lisitry ny backlinks amin'ny mpifaninana aminao ary hahita ny tsara indrindra avy amin'izy ireo. Zava-misy ara-dalàna tanteraka izany izay tsy manitsakitsaka ny fitsipika Google. Eritrereto fotsiny hoe inona no mety ho sarobidy amin'ny fanentanana fanentanana. Amin'ny alàlan'ny backlinks mpifaninana, mety hahita fifandraisana vaovao mifandraika sy manatsara ny SEO ianao.
Hanomboka amin'ny fikarohana ara-tsakafo, dia mendrika ny hikaroka ireo mpifaninana TOP dimy voalohany ao amin'ny fonosanao. Ireo tranonkala ireo dia manana rohy malaza kokoa raha oharina amin'ny anao, ary eto dia azonao atao ny mahazatra ny backlinks momba ny kalitaon'ny fanentanana anao.
Raha vao nahita ny mpifaninana nicheo voalohany ianao, dia mila manomboka manadihady ny rindran-damosiny. Raha hanatsotra ity tanjona ity ianao, dia azonao atao ny mampiasa fitaovana maimaim-poana toy ny Semalt Auto SEO, Backlinks Monitor na Moz.
Mila manampy ireo dom-pifaninananao amin'ny iray amin'ireo fitaovana ireo ianao, ampiasao ny môtika omena mba hamaritana hoe inona ny rindran-bola mendrika hindramina. Aza manandrana manamboatra azy ireo rehetra fa mety hiahiahy izy fa tsy ny rohy rehetra dia ny hatsarany. Ara-dalàna fa ny rohy rehetra ao amin'ny tranonkala dia manana rohy malemy, na dia ireo sehatra matanjaka indrindra amin'ny pejy PageRank avo indrindra aza dia mety manana izany. Araka ny ahitanao ny sary iray manontolo, ianao dia tokony hindrana fotsiny ireo rohy manana ny fahefana ambony indrindra. Raha ny fitsipika, ny fahasarotana kokoa dia ny mamela backlink ho an'ny tranokala, ny hasarobidiny ambony.
Azonao atao ny manamarina ny takelaka momba ny fahefana nomen'ny mpifanaraka aminao. Mba hijery ity fampahalalana ity dia manoro anao aho hampiasa ireo fitaovam-panaovam-pahaizana roa izay mety ho hitanao ao anaty aterineto - Semalt Web Analyzer sy Moz Domain Authority. Amin'ny fahazoana ireo zava-tsarobidy sarobidy ireo, azonao atao ny mahatakatra ny fomba ampifandraisan'ireo tranonkala ireo amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo. Miangavy manokana ny rohy dofollow satria izy ireo dia manana ny lanjany lehibe indrindra amin'ny fanatsarana ny fikarohana.
Rehefa mahita tranokala misy metry izay mifanaraka amin'ny fepetra takiana aminao ianao dia mila manamarina raha manan-danja amin'ny orinasanao ireo tranonkala ireo na tsia. Ankoatra izany, mila manamarina ny fomba nahazoanao mpifaninana ianao. Tokony hanamarina raha lahatsoratra bilaogy, lahatsoratra na referansy amin'ny fehezanteny roa. Eritrereto raha afaka manome tranokala tsara tarehy sy mifandray amina rindrambaiko ity tranonkala ity ary tonga mpandray anjara koa.
Diniho ny votoatin-dresaka izay nolazain'ny mpifaninana anao
Mety tsy ampy fotsiny ny mpitsikilo ho an'ny mpifaninana tsenanareo. Mba hahazoana tombontsoa avy amin'ny rindran-kira, tokony ho fantatrao hoe taiza no nanononan'ny anarany ny marika ao amin'ny tranonkala. Azonao atao ny manamarina ity fampahalalana ity amin'ny fitaovana noteneniko talohan'izay. Tadiavo ny rehetra miresaka amin'ny orinasa mpifaninana aminao ary miezaha hialoha ny hafa. Raha manao izany ianao, dia hanatsara ny fahafahanao hahazo fitarihana ambony kokoa.
Mamorona fanentanana fananganana rohy amin'ny infografika
Ny Infographics no fomba tsara indrindra hanolorana fampahalalana momba ny statistika amin'ny format manan-tompo. Ireo mpamoaka an-tserasera fanta-daza toy ny Huffington Post, Entrepreneur, Forbes ary ny hafa dia mampiasa ny infografika ao amin'ny lahatsoratra an-tsoratra. Ity fomba fampahafantarana vaovao ity dia tena tsara ho an'ny fanorenana rohy ary koa ny fitaterana fifamoivoizana amin'ny tambajotra sosialy satria karazana votoaty izay tena azo zaraina.
Ampiasao ny blôgin'ny vahiny mba hahazoana ny rindran-tsarimihetsika tsara
Ny blaogy gitara dia fahafahana tonga lafatra ho an'ireo izay te hanatsara ny fanatrehany ny aterineto. Amin'ny fampiasana teknolojia fananganana rohy, afaka mifandray amin'ireo mpanjifa anao ianao ary manangana fifandraisana mahatoky amin'izy ireo. Misy ny finoana iraisana fa tsy ankasitrahan'i Google ity fomba fitrandrahana anatiny ity. Na izany aza, Google dia manaiky ireo mpandray anjara vahiny. Izany no antony tsy ahiahy anao momba ny sazy raha tsy mavesatra loatra ny dokam-barotra sy ny adiresy spam. Ataovy azo antoka fa hamoaka afa-po avo lenta ianao ao amin'ny lahatsoratry ny vahiny izay mety ho sarobidy ho an'ny mpamaky ary mety hampiova azy ireo ho an'ny mpanjifanao. Raha tsy izany, ity fomba fiasa mifandraika amin'ny rohy ity dia tsy misy dikany ho an'ny tranonkala SEO.
Mamorona ny rafitra fifandraisana anatiny
Mba hahazoana antoka fa hahazo tombony amin'ny fanentanana fananganana rohy ianao dia mila mamorona rafitra fatorana anatiny mifandray. Tsy hanome fanatanjahan-tena tampoka tampoka izany, fa hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny tranokalanao ary hanome anao fotoana hanamboarana rohy hanatanterahana ny lahatsoratra amam-bika tianao.
Mba hamaranana, te-hanamarika aho fa tsy ilaina ny mividy rohy na mampiasa teknika hafa karama sy hosoka mba hamoronana fananganana fananganana rindrambaiko. Azonao atao ny manatratra ny tanjonao amin'ny fampiharana ireo fomba voalaza etsy ambony. Izy ireo dia mahasoa, vokatra ary, inona no tsara indrindra, amin'ny fampiharana azy ireo tsy hahazo sazy Google. Manàna faharetana sy maharitra raha toa ka mety ho sarotra sy sarotra be ny famolavolana ny rohy. Na izany aza, amin'ny farany, hahazo ny fiverenana ambony indrindra amin'ny fampiasam-bola ianao Source .